မယ့်ကိုး: တစ်ချို့အချစ်တွေက ရယ်စရာကောင်းတယ်…
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 1/25/2010 11:30:00 PM
သရဲတွေမှာလည်း ဟော်မုန်းရှိတာကိုး... ဆိုပြီး တွေးနေမှ....း)
25/1/10 11:24 PM
သေ.. ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေချည်းပါ့လား
ဒီလိုအချစ်မျိုးက အနစ်နာခံရလွန်းတယ်လို့ပြောဖို့ တွန့်ဆုတ်နေရသလို
26/1/10 12:40 AM
26/1/10 1:37 AM
ဂျီးတော်လေး.....သိပ်မလွမ်းနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ......မတန်ဘူး လွမ်းဖို့.........
26/1/10 4:16 AM
ကျနော်သာဆို ကိုယ်က သေခါနီးပဲ..သူချစ်ချစ် မချစ်ချစ် အထင်သေးသေး မသေးသေး ကိုယ့်အချစ်ကိုတော့ ချစ်ရကြောင်းတော့ ပြောပြသွားမယ်.ဒါမှ မဟုတ်..ခုလို.စာအရှည်ကြီးရေးထားခဲ့မယ်..ကိုယ်သေပြီးသူဖတ်ရတဲ့အခါ..သူ့ ဂရုမစိုက်ခဲ့မှုတွေ ရုပ်
ဆန်ဆန် အတွေးတွေ အတွက် သူကြေကွဲမှာ မဟုတ်ရင်တောင် မချစ်တတ်သူကို ချစ်ခဲ့ခြင်းများနဲ့ အနိုင်ပိုင်းခဲ့မယ်ဗျာ..
ရယ်စရာကောင်းစွာနဲ့ ..အင်း..ဒီလူက ..“တော်တော်...စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး.လို့” ပြောရုံလဲဖြစ်နိူင်တာပါပဲ.......ဘာတတ်နိူင်မှာလဲဗျာ..ချစ်ခြင်းမှာ...အကြိမ်ကြိမ်ကျဆုံးနိုင်တာပါပဲ...ကျဆုံးရဲဖို့ပဲ..ချစ်ခဲ့ရတာမျိုး..လား..မသိ..
အော်..အော်..ကိုချစ်ဖေတောင် အချစ်တွေ ဘာတွေ
26/1/10 4:51 AM
ဒီလိုအချစ်မျိုးနဲ့ တန်တဲ့သူ ရှားသားး
26/1/10 5:44 AM
ကောင်းတယ် စာတွေ မဖတ်ရတာကြာပြီ
တကယ် ၂ နှစ်ပဲ ခံတယ် ဆိုတာ တကယ်လား သိချင်တယ်
ဘယ်မှာ ၇ှိလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလား ရှာဖတ်ချင်တယ်
မဟုတ်ဘူးလဲ ထင်တယ် P:
26/1/10 9:23 AM
ဟာဗျာ သေမယ့် အကြောင်းတွေချည်းပါလား....
သေသွားရင်တော့ ဘယ်သူမှ သတိရတော့မှာမဟုတ်ဘူး...အစ်မရေ ...
26/1/10 9:43 AM
မမမယ်ကိုးရေ...ချစ်တတ်လိုက်တာ...အဲ့လောက်ထိ ချစ်တတ်ပါ့မလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသေချာ...ဒါပေမဲ့ ဟိုမုန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ် ဆိုတာ ခုမှ သိရတော့တယ်...
26/1/10 10:04 AM
ဒါမျိုးလူကိုချစ်ရတာတကယ်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းလည်း။အေးဆေး စိတ်ဖြောင့်စွာသေလို့ ရတယ်၊
ငါမရှိလည်း သူအေးဆေးပဲဆိုမှ အသေဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးလား၊
ဒုက္ခ ဒုက္ခ ..
စိတ်မချဘူး ဆိုတာက ဒီလိုလူအတွက်မဟုတ်ဘူးလေဗျာ။
နောက်ဘဝမယုံကြည်သူအတွက် သက်သေပြစရာမလိုပဲ စိတ်အေးစွာ သံယောဇဉ်ဖြတ်သင့်ပါတယ်နော်။
26/1/10 10:18 AM
အချစ်မှာ မထိုက်တန်တာတွေ ထိုက်တန်တာတွေ ရှိ၊ မရှိတော့ မသိ....
အချစ်စစ် ဆိုရင်တော့.. သူပြန်ချစ်တာ မချစ်တာ..
သူ ဘာဖြစ်ဖြစ်.... ဆက်ချစ်နေတော့မှာ အသေချာပေါ့..
“ကျွန်မ” ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သိပ်ချစ်တတ်တာ အထူးမပြောလိုတော့ပါ...
ကိုယ်စောင့်နတ် ဖြစ်ချင်သူ “ကျွန်မ” တစ်ဦးတည်း မဆိုလိုပါ။
တောင်းသော ဆု.. အရာရာတိုင်းအတွက် ဆိုလိုပါသည်...။
နဲနဲမြင့်တော့ တချို့ဟာတွေ သိပ်တော့ နားမလည်။
အင်း ... မမကိုးရေ... ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ တည်ငြိမ်စပြုနေတဲ့ အစအနလေးတွေတောင် အနယ်ပြန်ထချင်လာသလိုလို ဟဲ ဟဲ
နဲနဲမကဘူးရယ် ခံစားမှုက များများတူညီနေပါလားလို့တွေးမိရင်း ပြုံးနေလျှက်က မျက်ရည်စိမ့်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို နင့်နင့်သဲသဲ စာနာလိုက်မိပြန်တယ် ....
26/1/10 1:43 PM
i may very very disappointed your love if you are my friend or my sis,better you findalovely pet animals is better than your love one you know ,or else you try not to love that kind of animal.
Aung Myat Kyaw said...
I see your blog link from Manohari's blog's comments.
Very happy to see you stories again.
I didn't read too much within these years.
26/1/10 3:53 PM
အဲဒီကောင်မလေး သရဲလာခြောက်တာကို မြင်ချင်တာ။ ကောင်လေးကို ဘယ်လိုပုံစံ လာခြောက်မလဲဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း အခု စဉ်းစားနေတာ :) ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဟင် မယ်ကိုးးး
26/1/10 6:46 PM
လာရောက်ဖတ်ရှုဝေဖန်ပေးသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် :)
ချစ်မလေးရေ လသာညရေ ...မယ် စာထဲက ကျွန်မအစား သရဲခဏဖြစ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် :P
အောက်က လင့်ခတွေက ကိုမင်းအိမ်ဖြူနဲ့ ဟော်မုန်းအကြောင်း သိချင်သူများအတွက် နမူနာပါရှင်
အားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော် :)
26/1/10 7:53 PM
ညီမ မယ်ကိုးလေး ချစ်တတ်လိုက်တာ ညီမ စာထဲက ကောင်မလေးကို ပြောပါတယ်...။
26/1/10 8:36 PM
မချစ်တတ်သူမို့ သိပ်တော့ နားမလည်ဘူးရယ်.. :D
26/1/10 10:04 PM
ရှာမှရှားပါဘဲ။ ချစ်တတ်တဲ့စိတ်လေးသူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာလဲ အားကျနေမိပါတယ်။
... ကောင်မလေးဘက်ကိုချည်းဘဲ ဆွဲပြီး ရေးထားလွန်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ဗျာ။....
.... Oxytocin ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်ခိုက် လူတယောက်ယောက်နဲ့ကြုံဆုံမိချိန် သူ့မှာ Negative Emotion ဖြစ်နေပြီးတဲ့ အခိုက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေ။
... Vasopressin ဟော်မုန်းထွက်လို့ သူမ သစ္စာရှိနေနိုင်ပေမယ့်.. ကောင်လေးဆီမှာရှိတဲ့
Vasotocin က Oxytocin နှင့် Vasopressin တွေပိုင်ဆိုင်လဲဘဲ သူမရဲ့
.. ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဆိုသလိုမျိုးလဲ
(ယောင်္ကျာံးလေးတယောက်မို့လို့ ယောင်္ကျာံးလေးဘက်ကဘဲ) :D
27/1/10 3:45 AM
အဲလိုတော့ ချစ်ကြည့်ချင်သား ...း))
27/1/10 10:42 AM
27/1/10 8:34 PM
27/1/10 9:03 PM
ချစ်လို့ချစ်တာမဟုတ်ပဲ ချစ်ရတာ... တဲ့လားကွယ်..!!
28/1/10 8:05 AM
သေပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်လဲလို့ ဆက် စဉ်းစားနေတယ်..ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ အနေအထား တည့်တည့်ရောက်ဦးမှ မဟုတ်လား...။
28/1/10 7:43 PM
အယ် မမ သမီးက မန့်ပြီးပြီထင်နေတာ သမီး ဒါကိုဖတ်ပြီးပြီလေ သမီးဖတ်တုံးက ဒူမှတုံး ကွန်မန့်မပေးသေးဘူး သမီး မန့်ပြီးပြီ ထင်နေတာ စိတ်ထဲက မန့်လိုက်တယ်နဲ့ တူပါရဲ့ အော် ဒွက်ခ စိတ်နဲ့လူနဲ့လဲမကပ်ဘူး ရူးတော့မယ်နဲ့တူပါတယ် အခု မမရဲ့ ကွန်မန့်တွေ လာပြန်ဖတ်မှ သမီး မမန့်ရသေးမှန်းသိတယ် ရှပ်ပြာမလေး ကို ခွင့်လွှတ်ပါ အဟီးးးးးးးးး
အဟီးးးးး စ တာ မမ မချစ်တာကောင်းတယ် ပူလောင်တယ် မမ သိလား အဲဒီကောင်မလေးကို ပြောပေးနော် ဟိဟိ ခစ်ခစ်
29/1/10 6:17 AM
30/1/10 12:25 PM
မယ်ကိုး..အသေအချာ လာလည်ရင်း..ဒီစာလေးမှာ..ရပ်တန့် မှတ်ချက်ပေး နှုတ်ဆက်သွားတယ်။
လှပတဲ့ အရေးအသားလေး တွေ နဲ့.. နူးညံ့ တဲ့..စာရေးဆရာမလေး တယောက်ပဲ...
12/3/10 12:27 AM